Tolo-tanana : Ireo seho ho an’i Fanaiky -
AccueilVaovao SamihafaTolo-tanana : Ireo seho ho an’i Fanaiky
Tolo-tanana : Ireo seho ho an’i Fanaiky
14/09/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Voin-kava mahatratra. Manao sesilany ny finiavan’ireo mpanakanto namana nanohina ny antso nataon’ny fianakaviana. Maro ireo seho ho tolo-tanana an’i Fanaiky, mpitendry gitara beso ary mpikambana ao amin’ny tarika Solomiral. Omaly dia efa nisy ireo seho natolotry ny mpanakanto maro tetsy amin’ny Trass Tsiadana. Maromaro anefa amin’izao faran’ny herinandro izao ireo mpanakanto mitondra ny anjara birikiny amin’ny fanohanana io mpanakanto io. Efa misy rahateo ny hamehana amin’ny fitsaboana azy izay mila fandidiana tsy maintsy hatao any ivelany. Ireto ary ireo seho samihafa ho tolo-tanana ho an’i Fanaiky amin’ity faran’ny herinandro ity.
– Percu Vibration etsy amin’ny La Fabrik Ambondrona, zoma 14 septambra amin’ny 8ora ka hatramin’ny 10 ora alina, hiarahana amin’i Cedrick Ratovoarison, Junior ary Tam’s Rasamimanana izay fantatra amin’ny fivelesana ampongalava.
– Is’art Galerie Ampasanimalo – sabotsy 15 septambra amin’ny 7 sy sasany hariva : Olombelo Ricky, Silo ary Rolf
– Piment Café behoririka, sabotsy 15 septambra amin’ny 7 ora hariva hafanain’i Mika Kely, Harty Andriambelo, Roolf Razafindrakoto, Désiré Razafindrazaka, Nully Ramotosoa, Tonny Mahefa.
– Gare le Manguiers – espace Les Pangalanes Toamasina: hifandimby hiaka-tsehatra hitondra ny talentany ho fanohanana an’i Fanaiky ireo mpanakanto any Toamasina.
-No comment Bar – Isoraka, alahady 16 septambra manomboka amin’ny 2 ora tolakandro. Mpanakanto maro eo amin’ny sehatry ny jazz no hifarimbona hanafana ny hetsika toa an-dry Solo Andrianasolo, Jimmy B Zaoto, Andry Razafindrazaka…
“Betsaka ny feo haely etsy sy eroa fa matahotra miroso amin’ny fifidianana ny governemanta. Tsia, tsy matahotra miroso amin’ny fifidianana velively ny governemanta”. io no nambaran’ny praiminisitra lehiben’ny governemanta, Mahafaly Solonandrasana Olivier, manoloana ny tsaho ...Tohiny
Basikety – Somaroho 2018 : Tompondaka ny ASCB Boeny